USIZI LWABOHLANGA: Ukudilizwa kwemizi kucijise imikhonto – Bayede News
UMasipala iTheku usohlelweni lokuzobhidliza yonke le mizi eyakhe kule ndawo.
Posted on 29 November 2019 2 December 2019 by Bayede News
“Siyazi ukuthi inhloso kaHulumeni ngalezi zindlu zomxhaso ukunyonyobisa ukukhokhwa kwamareyithi ezindaweni zasemakhaya,” kusho uNks Nomusa Dlamini.
“UMnyango Wezemisebenzi yoMphakathi uthi kule ndawo yawo uyibekele ukwakha isikole, umtholampilo, ihholo lomphakathi kanye nenkundla yezemidlalo,” kusho uNks uSibiya. USibiya uthi naye akazi ukuthi le nkinga izoxazululeka kanjani.
“Isimo sishubile emphakathini, asazi ukuthi iyozala nkomoni,” kuphetha uSibiya.
Posted in Izindaba, S-Two